Uyiphucula njani inketho yesandi kwi-Samsung Galaxy yakho I-Androidsis
Ungayiphucula njani kwaye uguqule ukhetho lwesandi sayo nayiphi na i-Samsung Galaxy noMncedisi weSandi
UManuel Ramirez | | Samsung, Tutorials
Umncedisi wezandi yenye yezoapps sinayo kwi-Samsung Galaxy apho sinokuvula uluhlu olubanzi lwamathuba okuphucula ukhetho lwesandi.
Ngaphezulu kwako konke, kukho izinto ezimbini zoMncedisi weSandi ezizodwa ezifanelwe kukuqwalaselwa: ulawulo granular umthamo kwaye ukhethe inqanaba levolumu yeeapps esizifunayo ngokungagqibekanga. Kodwa ayihlali apha kuphela, kodwa kukho nolunye uthotho lwezinto onokuzinyanzela ukuba le app ye-Samsung ifakwe ngonaphakade.
1 Uhlelo lokusebenza oluphucula ukhetho lwezandi kwiGalaxy yakho
2 Ungawatshintsha njani amanyathelo okuphakamisa okanye ukunciphisa umthamo weGalaxy yakho
3 Ulawula njani ivolumu yenkqubo nganye
4 Uyenza njani enye insiza ukuba idlale isandi ngaxeshanye nenye
Uhlelo lokusebenza oluphucula ukhetho lwezandi kwiGalaxy yakho
Ngaphandle kokukhetha ivolumu esifuna ukuba ihlale ivulekile, umzekelo, iYouTube, sinokuqinisekisa ukuba xa sicinezela ivolumu phezulu okanye ezantsi isitshixo ayinyuki okanye yehle kakhulu. Ngale ndlela siya kuba nolawulo lwegranular ngakumbi kumthamo ukuze sikwazi ukuwushiya kwinqanaba elifunwayo, kuba ngokwakhona ngamanye amaxesha uye unyuke okanye wehle kakhulu.
Ayisiyiyo le kuphela, kodwa sinako yenza kwaye uguqule iimeko Ukungagqibeki ngokusekwe kwiintsuku zeveki nexesha. Oko kukuthi, tshintsha zonke iisetingi zevolumu xa sisekhaya ukusuka ngo-18: 00 emva kwemini ukuya ku-23: 00 emva kwemini, okanye ukuzitshintsha ebusuku. Umncedisi wezandi akasweli nto njengoko uqhubeka nokubona; kanye njengokuba unokufumana Ikhamera kaGoogle yeGalaxy S9 yakho.
Kodwa kuninzi okungakumbi:
Ivumela lawula ivolumu yemidiya endaweni yokukhala Ukufowuna xa amaqhosha evolumu ecofa.
Inika inkxaso yevolumu yesicelo ngasinye.
Amanyathelo ali-150 olawulo lwenqanaba levolum granular.
Unokwenza kwaye usebenze useto lwesandi esiko.
Izipesheli mono audio inkxaso kunye nebhalansi yasekhohlo / yasekunene.
Cinezela i icon yevolumu yeapp kwincoko yokudada ukuze udlale / ume kancinci kwaye ucofe ixesha elide ukufaka usetyenziso.
Ezi ndlela zilandelayo ziyafumaneka yenguqulo 8.5 okanye engaphezulu ukusuka kumava eSamsung:
Los amanyathelo okungagqibekanga okuphakamisa okanye ukunciphisa ivolumu xa iqhosha licinezelwe banokutshintsha.
Iziphumo zesandi sesicelo ngoku zinokutshintshwa phakathi kweBluetooth okanye isithethi ngencoko yevolumu edadayo.
Useto lwesilinganisi lungagcinwa kwaye kwabelwane ngalo.
Kwaye okokugqibela, ezi zilandelayo ze Amava e-Samsung 9.0:
Ukwazi ku tshintsha isandi ukusuka ekhohlo ukuya ekunene xa ii-headphone zidityanisiwe.
Ukwazi ku yiva iringithoni, isaziso kunye nezandi zealam kuphela kwi-headset kunye nomnxeba osebenzayo.
Umtya opheleleyo wemisebenzi yokuphucula amathuba esandi kwifowuni yakho ye-Samsung Galaxy kwaye ngokwabo bathathe inyathelo eliya phambili lokumisela, umzekelo, iPUBG Mobile, kunye nohlaziyo olutsha kwiintsuku ezidlulileyo, ukuya Umthamo ngqo osoloko ufuna ukudlala ngawo. Ngoku siza kukubonisa indlela yokusebenzisa ezinye zeendlela onokuthi ukhethe kuzo.
Ungawatshintsha njani amanyathelo okuphakamisa okanye ukunciphisa umthamo weGalaxy yakho
Siya kuMncedisi weSandi.
Sijonge ukhetho Izicwangciso eziPhambili esekupheleni.
Kwiskrini esilandelayo sifumana «Guqula inyathelo lelizwi«.
Ngokuzenzekelayo icwangciselwe amanyathelo ayi-10. Zama u-5 ukuze ufune ukuphinda amaqhosha amaqhosha ukufikelela kwinqanaba levolumu oyifunayo kunye nolawulo olungcono lwayo.
Ulawula njani ivolumu yenkqubo nganye
Olunye ukhetho olukhulu lokubeka i-Fortnite, xa sele sazi ukuba izipho ziya kuba njani, kumthamo othile:
Cofa apha Iivolumu zomntu ngamnye.
Kwisikrini esilandelayo siza kucofa kwi icon yokudada +.
Sikhetha usetyenziso. Kule meko iPUBG Iselfowuni.
IPodemos yongeza zonke ii -apps esizifunayo.
Siza kufumana i-icon yeapp kunye nevolumu yayo ukuze sikwazi ukuyilungisa ngokufanelekileyo.
Uyenza njani enye insiza ukuba idlale isandi ngaxeshanye nenye
Okokugqibela, enye yezo nketho zoMncedisi onomdla ezinokubangela ukuba usetyenziso olunye ludlala isandi ngaxeshanye nolunye. Ngale ndlela asiyi kunciphisa ukusetyenziswa kwayo. Oko kukuthi, ukuba senza iYouTube isebenze ngale ndlela, nokuba sidlala inqaku lelizwi likaWhatsApp (aliqela aza kudlalwa ngokuqhubekekayo kungekudala), inqaku kunye neYouTube ziya kuvakala ngaphandle kokuphazamisa enye.
Makhe siye Lawula umsindo.
Senza isandi sokuSebenza kwesibini.
Sikhetha usetyenziso olusuka kuluhlu.
Ke sele uyazi indlela yokuphucula ukhetho lwesandi seSamsung Galaxy yakho noMncedisi weSandi, usetyenziso olukhulu ekuvumela ukuba wenze izinto ezininzi ukuphucula amava emultimedia.
Umthuthukisi: I-Samsung Electronics Co, Inc.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Ungayiphucula njani kwaye uguqule ukhetho lwesandi sayo nayiphi na i-Samsung Galaxy noMncedisi weSandi
Nceda uBomvu abuyise iplanethi yakhe ethandekayo iOrbitus kwiiTrigger Heroes